Semalt - स्पामले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
शब्दावली स्प्यामको ऐतिहासिक रेखांकन रोचक छ। जब हामी स्प्याटमेन्सी ब्यापार ईमेलको बारेमा स्प्यामको बारेमा कुरा गर्छौं, संक्षिप्त स्प्याम सूचना वा ईमेलको साथ केहि गर्न बाँकी हुँदैन।
माइकल ब्राउन, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, स्प्याम के हो भनेर वर्णन गर्दछ।
स्प्याम भन्ने शब्दले यसको जग एकदमै बिरामी परेको लन्च मीटमा राखेको छ - अमेरिकी पोषण संगठन होर्मेल सुसेन्सन्सको प्रमुख वस्तु - र अजीबोगरी अंग्रेजी कमिक ड्रामाको प्रारम्भिक पीसी नर्ड्सको आराधनाले मोन्टी पाइथनको फ्लाइंग कार्निवाल मारा।
स्पाम खाजा बैठक मासुको पहिलो जार १ 37 .37 मा डेलिभर भएको थियो, र यो द्रुत रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारीमा परिणत भयो। युरोपमा सम्बन्धित फौजहरूलाई निरन्तर राख्न हरेक हप्ता १ million मिलियन स्प्याम स्प्याम प्रदान गरियो। यसबाहेक, दिउँसोको खाजा-सँगैको मासु यी लाइनहरूमा सँगै थियो मार्गरेट थैचर र ड्वाइट आइसनहवार दुबै संयुक्त विजयको लागि यसको भागको लागि।
त्यसो भए शब्दावली स्प्याम कहाँबाट सुरु भयो? यसको जन्मस्थल गहन रूपमा सामना गरीएको छ। नाम स्पाम 'स्पाइसिड हेम' को एक बाधा बाट प्राप्त गरिएको थियो। स्प्यामको पहिलो वर्गीकरण आजको रूपमा पहुँचयोग्य नै छ, सबैको 'स्पाइसिड हम्मेसेट' को रूपमा मान्यता छ।
स्प्याम छवटा मूल तत्व प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ:
सुँगुरमा हामको मासुले प्रभुत्व जमायो (जे भए पनि नरकको आगोले)
सोडियम नाइट्रेट फ्रान्क र बेकन जस्तो मासुलाई प्रशोधन गर्नमा प्रयोग गरिएको नुनको प्रकार हो - त्यसैले स्प्याममा सोडियम नाइट्रेट र मानक तालिका नुन दुबै छ कि यसले थप नुन बनाउँदछ। सत्य भन्न सकिन्छ, सामान को एकल सेवा को लागी सोडियम को निर्धारित मापन को लगभग% 53% छ। त्यसैले यो ठीक एक भरणपोषण छैन कि कल्याण पोषण।
यसलाई बनाउने तर्फ आधारभूत आधारभूत हो, जुन स्प्यामको साइटले संकेत गर्यो:
पहिले, हेम र पोर्क पूर्व-तयारी गरिन्छ।
त्यस पछि चिनी, नुन, र जे पनि फिक्सि leftको बाँकी छ समावेश गरीन्छ र २० मिनेटको लागि मिश्रित हुन्छ, लोभ्याइएको तापमान प्राप्त गर्न।
त्यसपछि, मिश्रण क्यानिंग प्लेटफर्ममा सारिन्छ, जहाँ यसलाई प्रख्यात धातु जारमा थपिएको छ, र कुनै पनि क्षणमा १२ औन्स।
औन्स भरेपछि जारहरू अन्त मेशीनमा पठाइन्छ जहाँ कभर भ्याकुम फिक्सिंग मार्फत जडित हुन्छन्।
त्यस पछि जारहरू तताइएको छ र करिब तीन घण्टाको लागि फ्रिज गरिन्छ। अब तिनीहरू प्रयोगको लागि तयार छन्।
तर जारहरू अज्ञात छोड्न सक्दैनन्। नामहरू जडित छन्, र पछि, तिनीहरू केसिंगको लागि सेट छन्, किनकि तिनीहरू ढुवानीको लागि प्रतिक्षा गर्दछन्।
स्पाम के हो?
केहि विसेक्र्याकहरूले यसलाई 'मासु जस्तो व्यवहार गर्ने' को लागि एक संक्षेपमा लिंक गर्दछ तर प्रमाणित रेखा के हो भने कसैले यसको अर्थ के हो बुझ्दैन। वास्तवमा, स्प्याम पनि।
'त्यहाँ केहि जिज्ञासाहरू छन् जुन व्यक्तिलाई निरन्तर केही समय पछि सताउँछ। "के पृथ्वीको विगतको चतुर जीवन छ?" जस्ता प्रश्नहरू छन्? र "स्पाम चिन्ह नामको महत्व के हो?" विलापको रूपमा, हामी एक वा अर्कोलाई उत्तर दिन सक्दैनौं, 'साइट भन्छ।
स्प्याम चिन्ह नामको अनिवार्यता केहि समयको लागि परिकल्पनाको विषय भएको छ। एउटा मुख्यधाराको सोचले यो 'मसलादार हेम' भन्ने शब्दहरूबाट आएको हो भन्छ। वास्तविक उत्तर पहिलेको हर्मेल सुसेन्स प्रशासकहरूको अलि बढीले चिनिन्छ।